Baarlamaanka Hirshabeele oo buuq hareeyay iyo golaha wasiirada maamulkaasi oo la ansixiyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Baarlamaanka Hirshabeele oo buuq hareeyay iyo golaha wasiirada maamulkaasi oo la ansixiyay
Wararka naga soo gaarayo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in buuq iyo fowdo uu maanta hareeyay kulan uu baarlamaanka maamulka Hirshabeele ku yeeshay magaaladaasi.
Kulankaasi oo ahaa mid cod loogu qaadayay golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa markii dambe isku badalay mid buuq hareeyay.
Illaa 85 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeele ayaa maanta soo xaadirtay kulanka, iyadoona 71 ka mid ah xildhibaanadaasi ay ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Cali C/laahi Cosoble.
Dhinaca kale, muranka xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeele ayaa ka dhashay ajendayaasha kulanka looga hadlaayo, taasoo keentay in muddo ah uu buuq ka socdo xarunta baarlamaanka, balse markii dambe cod lagu ansixiyay golaha wasiirada Hirshabeele.
Xildhibaanadii kasoo horjeeday magacaabista golaha wasiirada Hirshabeele ayaa heli waayay codad ku filan.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeele Sheekh Cismaan Maxamed Barre oo natiijadda ku dhawaaqay ayaa sheegay in 71 xildhibaan ay ansixiyeen golaha wasiirada Hirshabeele, sidaasna uu ansax ku yahay.